०७८ साल जेष्ठ ३० गते आइतबार, हेर्नुहोस् तपाईहरूको राशि अनुसारको भाग्यफल यस्तो छ ! – List Khabar
Home / राशिफल / ०७८ साल जेष्ठ ३० गते आइतबार, हेर्नुहोस् तपाईहरूको राशि अनुसारको भाग्यफल यस्तो छ !
०७८ साल जेष्ठ ३० गते आइतबार, हेर्नुहोस् तपाईहरूको राशि अनुसारको भाग्यफल यस्तो छ !
admin June 13, 2021 राशिफल Leaveacomment 227 Views
आज श्री शाके १९४३ बि.स.२०७८ साल जेष्ठ ३० गते आइतबार इश्वी सन २०२१ जुन १३ तारीख जेष्ठ शुक्लपक्ष तृतिया तिथी, पञ्चाङ्ग: वृद्धि तैतुला पुनर्वसु, मृगशिरा नक्षत्र शुल योग पश्चात गण्ड योग बालव करण चन्द्रमां मिथुन राशिमा आनन्दादि योगमा मानस योग राक्षसनाम संवत्सर सुर्य उत्तरायणं ग्रीष्म ऋतु चन्द्रोदय, विश्व बालश्रम विरुद्ध दिवस (ज्यो.प.सरोज घिमिरे)
मेष (चू,चे,चो,ला,लि,लू,ले,लो,अ) धन कमाउने योग छ तथा फलिफाव हुने दिन छ । पशुधनबाट प्रशस्त फाइदा हुने देखिन्छ । काम बन्नाले सुखको अनुभव हुन्छ । रमाइलो दिन छ । पराक्रम र उत्साह बढ्नेछ । व्यापारिक वा दैनिक कामहरू सन्तोषजनक ढंगले सम्पन्न हुनेछन् ।
बृष (ई,ऊ,ए,ओ,वा,वी,वू,वे,वो) काम बन्नाले सुखको अनुभव हुन्छ । नोकरीमा दिन सामान्य रहला । अनेक किसिमका फाइदा हुनेछ । अप्रत्याशित लाभ हुनेछ । कार्यसम्पादन गर्ने क्षमता बढ्नेछ । सोचेको काम उचित समयमा सम्पादन गर्न सकिने र साख जोगाउन सकिने छ ।
मिथुन (का,की,कू,घ,ङ,छ,के,को,हा) काममा समस्या देखिएला । अनेक किसिमका झमेलामा परिएला । आज केही हानि हुन सक्छ, सावधान रहनु होला । नयाँ कामको प्रस्ताव आउन सक्छ । बोली वचनमा सुमधुरताको आगमन हुनेछ । मनमा उत्साह र उमङ्गको कमी हुनेछैन ।
कर्कट (ही,हू,हे,हो,डा,डी,डु,डे,डो) तपाइको आफ्नो विचारले धेरैलाई आकर्षण गर्ने समय छ । धन कमाउने योग छ । परोपकारका काममा पनि मन जानेछ । धन आर्जनमा राम्रो दिन छ । आश्वासन दिनेहरूबाट धोका पाइने छ । नजिकका साथीभाइ टाढिने सङ्केत छ ।
सिंह (मा,मी,मू,मे,मो,टा,टी,टू,टे) अनौठो तरिकाले कमाइ भइ मन खुशी बन्ला । टाढाको यात्राको पनि योग रहेको छ । फलिफाब हुने दिन छ । राम्रो कमाइका कारण सुख मिल्नेछ । आम्दानी बढ्ने र उठ्नुपर्ने रकम हातलागी हुने समय छ । पितृधन उपयोग गर्दा अझ लाभ हुन सक्छ ।
कन्या (टो,पा,पी,पू,ष,ण,ठ,पे,पो) टाढाको यात्रा गर्ने योजनामा हुनुहुन्छ भने केही दिनका लागि स्थगित गर्नु बेस हुनेछ । केहि सुख केहि दुख हुनेछ । अचानक कमइ हुनेछ । लगनशीलताले कीर्तिमानी दिलाउन सक्छ । प्रतिष्ठित काम गर्ने मौका छ । अरूलाई प्रभावित पारेर काम बनाउने समय छ ।
तुला (रा,री,रु,रे,रो,ता,ती,तू,ते) गरेका कामबाट ठूलो उपलब्धी लिन सकिंदैन । समयको ब्यर्थ नाश होला । व्यर्थको खर्च होला । नसोचेको ठाँउमा खर्च हुन सक्छ । यश, सम्मान र प्रतिष्ठामा बृद्धि हुनेछ । परोपकार र धार्मिक क्षेत्रमा लगानी गरेमा राम्रो प्रतिफल प्राप्त हुनेछ । मनोरञ्जनमा भुलिने समय छ ।
बृश्चिक (तो,ना,नी,नू,ने,नो,या,यी,यू) अवसरको खोजीमा केही दौडधूप गर्नुपर्ला । अनावश्यक यात्राको योग छ । सुखको अनुभव हुन्छ । आफन्त मिलनले सुख दिनेछ । अरूका काममा महत्वपूर्ण समय बित्न सक्छ वा सानातिना घरेलु काममै अल्झनुपर्दा मन खिन्न रहने छ । प्रयत्न गरे पनि परिश्रम निरर्थक हुनेछ ।
धनु (ये,यो,भा,भी,भू,ध,फा,ढा,भे) श्रद्धा र परोपकारमा मन जानेछ । स्वास्थ्यमा भने कमजोरी अनुभव हुनेछ । खर्च भन्दा कमाई नै बढी हुनेछ । शिक्षामा पनि राम्रो प्रगति हुनेछ । विभिन्न सहयोग र उपहार पाइने छ । प्रियजनसँगको भेटघाटले दिन रमाइलो बनाउनेछ । नयाँ ज्ञान सिक्ने मौका छ ।
मकर (भो,जा,जी,जू,जे,जो,ख,खी,खू,खे,खो,गा,गी) दुःखमा साथ दिनेहरू प्रशस्तै भेटिनेछन् । साथै पैसा कमाइने छ । विपरित लिङ्गिको हौसलाले मन रमाउनेछ । मनोरञ्जनात्मक तरिकाबाट काम बन्ला । पारिवारिक र दाम्पत्य सम्बन्ध प्रगाढ बन्नेछ । व्यावसायिक यात्राको सम्भावना छ । व्यापार तथा उद्योगतर्फ फाइदा हुने योग छ ।
कुम्भ (गू,गे,गो,सा,सी,सू,से,सो,दा) बिहान काम बन्नेछ, बेलुका सामान्य तनाब होला । इष्टमित्रहरुसँग असमझदारी बढ्न सक्छ । वादविवादको सामना गर्नु पर्ला । गोपनीय ढंगले गरिएको कामबाट मनग्ये फाइदा हुनेछ । सुखद समाचारले अझ उत्साह बढ्नेछ । पढाइ लेखाइमा प्रगति हुनेछ ।
मीन (दी,दू,थ,झ,ञ,दे,दो,चा,ची) पेशागत रुपमा समस्या देखिन सक्छ । केहि सुख केहि दुख हुनेछ । नोकरीमा झमेला ब्यहोर्नु पर्ला । जागिरको काममा डर हुनेछ । सम्झौताले खिन्नता बढाउनेछ भने बुद्धिको उपयोगले लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिने छ । भूमि तथा मातृधनबाट लाभ लिने समय छ ।
Previous निषेधाज्ञा उल्लंघन गर्ने १ हजार ७ सय ८४ वटा सवारी साधन प्रहरीको नियन्त्रणमा
Next क्याप्टेन विजय लामा ५०० घरलाई पुग्ने खाद्यान्नसहित यसरी पुगे ,आफ्नो ज्यानको प्रवाह छैन तर कोहि म र्नु हुदैन् ,यशो भन्छन् उनी (हेर्नुस् भिडियो